FIARA DUSTER NAMPIAHIAHY : Nandositra rehefa nosakanan’ny mpitandro filaminana
Fiarakodia marika duster iray no nosakanan’ny polisy ny sabotsy teo noho izy manao fitaratra mainty manontolo. Tsy nanaiky nijanona anefa ilay fiara fa nandositra avy hatrany ary nifanenjehan’ireo polisy. 20 février 2018
Nandalo teny amin’ny katedraly iny ary nitsofoka any Antsahavaky. Araka ny fantatra dia tsy tratran’ireo polisy ity fiarakodia ity. Nanambara kosa ny nahita maso fa nanapoaka basy ireo polisy fa tsy noraharahian’ireto olona tao anatin’ilay fiara izay nitondra ny laharana miafara amin’ny TBH.
Voarara eto Madagasikara ny fampiasana fitaratra matroka na mainty ary tsy maintsy azahoana alalana manokana ny fanaovana izany. Matetika mantsy dia ampiasain’ny olona hanaovana asa ratsy ireny fiara misy fitaratra mainty ireny ka tsy hita ny olona ao anatiny. Manao antso avo amin’ireo izay mety mahita ity fiara ity kosa ny mpitandro filaminana hampandre azy ireo avy hatrany raha mahita io fiara io.